जटिल बन्दै कोभिडविरुद्धको लडाइँ «
जटिल बन्दै कोभिडविरुद्धको लडाइँ
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण देशभर तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ । हरेक दिनजसो संक्रमित र मृतकको संख्या बढ्दै गएको छ । पछिल्ला केही दिनको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि संक्रमित र मृतकको ग्राफ उकालो लाग्दै गएको छ । बिहीबारमात्रै ९ हजार ७० जना संक्रमित हुँदा ५४ जनाको मृत्यु भएको छ । अधिकांश सरकारी र निजी अस्पतालहरू संक्रमितले भरिएका छन् । अक्सिजनसहितको बेड अभावका कारण संक्रमितले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कोभिडको उपचारमा अस्पतालहरूले ध्यान दिँदा अन्य बिरामीले पनि उपचार नपाउने अवस्था देखिएको छ । विगतको भन्दा यसपटकको कोरोनाको जोखिम बढी भएकाले सावधानी अपनाउन विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीसमेत धमाधम संक्रमित भइरहेकाले कोभिडविरुद्धको लडाइँ निकै जटिल बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ । कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सरकारी अस्पतालको भूमिका, कोभिडबाहेकका बिरामीलाई उपचारबाट वञ्चित हुन नदिन के गर्नुपर्ला लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न सरकारी अस्पतालका मेसु र चिकित्सकसँग कारोबारकर्मीहरूले गरेको कुराकानीको सार ः
हाम्रा जनशक्तिलाई कोभिडबाट जोगाउनु पहिलो कर्तव्य हो
डा. चुमनलाल दास
मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, कोसी अस्पताल, विराटनगर
कोरोनाको संक्रमण विराटनगरमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ । विराटनगरमा पछिल्लो समय दैनिक २ सयभन्दा बढी संक्रमित फेला परिरहेका छन् । कोसी अस्पतालमा हरेक दिन १ सय ५० जनाको स्वाब परीक्षणका लागि पीसीआर हुने गरेको छ । पीसीआर गरेकामध्ये ५८ प्रतिशतको रिपोर्ट पोजेटिभ आउने गरेको छ । कोरोनाको पहिलो लहरका बेलामा ८ देखि १० प्रतिशतको मात्रै रिपोर्ट पोजेटिभ आउँथ्यो । यसले पनि के प्रस्ट हुन्छ भने कोरोनाको दोस्रो लहर निकै व्यापक रूपमा फैलिरहेको छ । हामीले अहिले स्वाब संकलन, पीसीआर जाँच, फिबर क्लिनिक सञ्चालन, १० बेडको आइसोलेसन बेड सञ्चालन गरेर कोभिड–१९ का बिरामीलाई सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । कोसी प्रादेशिक अस्पतालमा कोभिडबाहेक अन्य बिरामीको पनि उपचार गरिरहेका छौं । ओपीडी सेवा पूर्ववत् रूपमै सञ्चालन भइरहेको छ । तर, विगतको तुलनामा अस्पताल आउने बिरामीको संख्या घटेको छ । विगतमा ओपीडी सेवा १ हजार २ सय जनाले दैनिक रूपमा लिने गरेका थिए । अहिले २ सय ५० देखि ३ सयको हाराहारीमा ओपीडी सेवा लिन आउने गरेका छन् । त्यसमध्ये १ सयदेखि १ सय ५० जना जति कोभिडको आशंकामा चेकजाँच गर्न आउने गरेका छन् । हामीले सबै किसिमको स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदा–अपनाउँदै पनि एक जना चिकित्सकसहित १३ जनामा संक्रमण भइसकेको छ । नर्स, सफाइका कर्मचारीमा पनि संक्रमण भएको छ । यसले हाम्रा जनशक्तिलाई कोभिडको संक्रमणबाट जोगाउनु चुनौती देखिएको छ । चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित भएमा कोभिडका बिरामीका उपचारमा समस्या हुन्छ । यसले गर्दा हामीले जनशक्तिलाई जोगाउनेतर्फ ध्यान दिएका छौं । बिहीबारमात्रै पनि थप ३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । कोसी अस्पतालबाहेक ९६ बेडको कोसी कोभिड अस्पताल पनि सञ्चालन भइरहेको छ, जसमा २१ बेडको आईसीयू र २० बेडको भेन्टिलेटर सुविधा छ । ९६ बेडमध्ये करिब ६० प्रतिशत बेड भरिएको छ । बिरामीको चाप हरेक दिनजसो बढ्दै गइरहेको छ । अस्पताल भर्ना हुनेमध्ये अधिकांशलाई अक्सिजनको सपोर्ट आवश्यक पर्छ । सीमित जनशक्तिले काम गर्नुपरेको छ । कोसी कोभिड अस्पतालमा भने प्रदेशबाट पनि जनशक्ति परिचालन भएका छन् ।
अझै केही हप्ता कडा लकडाउन गरौं
डा. विकास गौचन
प्रमुख, प्र्रदेश संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, पोखरा
कोरोनाको दोस्रो लहरले कास्कीसहित प्रदेशका ११ जिल्लामा निकै भयावह अवस्था आउँदै छ । प्रदेशमा प्रत्येक दिन कोरोनाका बिरामीको संख्या दैनिक ३ सयभन्दा बढी रहेको छ भने दैनिक करिब तीन–चार जना कोरोनाबाट मृत्यु भएका छन् । हामीसँग भएको स्रोतसाधनबाट अहिलेको अवस्थामा कोरोनाको उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुग्दै छौं । सामुदायिक अस्पतालहरूमा जनशक्ति अभाव भएकाले गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार गरिब तथा मध्यम वर्गका व्यक्तिहरूमा पर्ने देखिन्छ । सायद १०औं वर्ष आम्दानी गरेर बचत गरेका केही व्यक्तिको निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा घरघडेरीसमेत सकिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । निजी अस्पतालहरूले भने महँगो शुल्कमा कोरोनाका बिरामीहरूको रेखदेख गरेका छन् । कोरोनाबाट बच्ने उत्तम उपाय भनेको सकभर घरमै बस्नु, अत्यावश्यक परेका बेलामा स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य मास्क, सेनिटाइजर, भौतिक दूरीलगायतका कुरालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ । कोरोनाको लक्षण देखा परेर व्यक्तिलाई श्वास–प्रश्वासमा केही समस्या भएमा, ज्वरो बढी आउनेलगायतका समस्या देखा परेमा तत्काल नजिकको अस्पतालमा लैजानुपर्छ ।
गण्डकी प्रदेशले अन्य प्रदेशसँगको सम्बन्ध कोरोना कालमा नजोड्दा राम्रो हुन्छ । आकस्मिक सेवा जुनसुकै अस्पतालले दिनुपर्ने भएकाले सेवाग्राहीलाई समयमै सेवा दिनुपर्छ । अत्यावश्यक एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, खाद्य सामग्रीका सवारी साधनबाहेक अन्य सेवा ठप्पै पार्नुपर्छ । अझै पनि घरघरमा निमोनिया भएका बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पहिचान गरेर जतिसक्दो छिटो उपचारमा ल्याउनुप¥यो, केहीलाई अक्सिजनसमेत दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारी अस्पतालहरूलाई व्यवस्थित र समयमै लगानी गर्न सकेको खण्डमा धेरै जनता यसबाट लाभान्वित हुन्छन् । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा कोरोनाका गम्भीर प्रकारका बिरामीहरू आउने हुँदा पोखरामा रहेको अर्को सामुदायिक अस्पताल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि कोरोनाका ५० भन्दा बढी बिरामीहरू भएको बुझिएको छ ।
प्रदेशको कोरोना डेडिकेट अस्पतालमा हाल ५० सिट क्षमताको अस्पताल भए पनि हामीले जेनतेन कर्मचारीको अभावका बाबजुत पनि ५५ जना बिरामीलाई सेवा दिएका छौं । सक्रिय संक्रमितहरूलाई जतिसक्दो छिटो आइसुलेट गर्नुप¥यो । पोखरा–३० मा रहेको लेखनाथ सामुदायिक अस्पताललाई कोरोनाको उपचार गर्ने भन्दै कोरोना डेडिकेट संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका रूपमा विगत १० महिनाअघि स्थापना गरे पनि हालसम्म उक्त अस्पतालबाट आईसीयू र भेन्टिलेटरको सुविधा दक्ष कर्मचारीको अभावमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
सामाजिक बानी–सुधारले मात्रै संक्रमण नियन्त्रणमा आउन सक्छ
प्रमुख, नारायणी अस्पताल, वीरगन्ज
कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाउनु एक अर्कासँग सम्पर्क नहोस् भन्ने उद्देश्यले नै गर्ने हो । संक्रमणको चेन ब्रेक गर्नलाई नै गर्ने हो । तर, महामारीको कुन अवस्थामा गर्ने हो, कति प्रभावकारी हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ । सुरुवातमै गरिएको भए चाँडै संक्रमणको चेन ब्रेक हुन्छ । समुदायमा संक्रमण फैलिसकेपछि अलि गाह्रै हुन्छ । तर पनि हाम्रो बानीबेहोरामा भर पर्छ । निषेधाज्ञा लगाए पनि भोजभतेरमा गइरहने, समूहमा हिँडिरहने, बजारमा गइरहने ग¥यो भने एकअर्कामा सम्पर्क भइरहन्छ । त्यसैले कडा नगरी निषेधाज्ञाले मात्रै संक्रमणको चेन ब्रेक असम्भव हुन्छ । निषेधाज्ञाको विकल्प पनि छैन । समुदायमा संक्रमण फैलिसकेको छ । संक्रमितको चाप अत्यधिक नै छ । संक्रमितको सिटी भ्यालु हेर्दा पनि भाइरसको लोड संक्रमण छिटै सार्न सक्ने खालको देखिन्छ । जति धेरै भाइरसको लोड हुन्छ, त्यति धेरैलाई सार्न सक्छ । त्यही भएर निषेधाज्ञामा कडाइ नै गर्नुपर्छ ।
एक जनामा संक्रमण भयो भने सुषुप्त रूपमा एकदेखि तीन हप्तासम्म रहन सक्छ । तीन हप्तापछि मात्र पनि लक्षण देखाउन सक्छ । यसको मतलब त्यति बेलासम्ममा पनि भाइरस सार्न सक्छ । निषेधाज्ञा भनेको नै होम क्वारेन्टाइनलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । किनभने घरबाट निस्किएन, अरूको सम्पर्कमा आएन भने रोग सार्न सक्दैन । यसको विकल्प पनि छैन । औषधि र खोपले पनि विश्वव्यापी रूपमा काम गरेको छैन । गत वर्षको भन्दा अलि कडा खालको भाइरस छ । गत वर्षको भाइरसले कमजोर शारीरिक अवस्था भएकाहरू, दीर्घरोगीहरू र वृद्धवद्धाहरू बढी प्रभावित भएका थिए । अहिले त युवा र बालबालिकाहरू बढी प्रभावित छन् । गत वर्ष ९०÷९५ प्रतिशतलाई भाइरसले छुँदैनथ्यो । दोस्रो भेरियन्टको भाइरस निकै खतरनाक देखिएको छ । अहिले युववर्ग पनि दुई–चार दिनमै शिथिल हुने गरेका छन् । सीधै फोक्सोमा संक्रमण हुने गरेको छ । श्वासप्रश्वासको गति रोकिन्छ । त्यही भएर निषेधाज्ञा लगाउनैपर्छ । कम्तीमा दुई हप्ता, तीन हप्तासम्म निषेधाज्ञा कडा गरियो भने यसको साङ्लो तोड्न सकिने सम्भावना हुन्छ । गत वर्ष पनि त्यही भएको हो । तर, समाजले बुझेका छैनन् । बुझे पनि प्राथमिकता केलाई दिने भन्ने हुन्छ । अहिले प्राथमिकता भनेको सम्बन्ध कायम राख्ने भन्नेलाई बढी महŒव दिएका छन् । मान्छेहरू भोजभतेरमा जाने, विवाह–समारोहमा जाने गर्छन्, तर यति थाहा छैन– ज्यान रहे त फेरि सम्बन्ध कायम राख्न सकिन्छ । यहाँ त नपढेको मान्छेले बुझेन भनौं भने पढेलेखेका व्यक्तिहरूले पनि बुझेका छैनन् । गत वर्षको अनुभवलाई हेर्दा पनि हुन्छ । बारम्बार देखिरहेकै छौं । निषेधाज्ञा र लकडाउनले नै भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा आएको हो । निषेधाज्ञा लगायो भने संक्रमणको दर घट्छ । फेरि खुला ग¥यो भने बढ्छ । यहाँ त खुला हुनासाथ स्वीमिङ पुल जाने, विवाह पार्टीमा जाने तथा विभिन्न सभा–सम्मेलनहरू गर्न थाल्छन् । चीनले एकैचोटि नियन्त्रणमा लियो । त्यहाँ कडा खालको लकडाउन ग¥यो । एकैपटक चेन ब्रेक ग¥यो । यहाँ समाजको बानीबेहोरा र स्वतन्त्रताको नाममा संक्रमण फैलिएको छ । प्रशासनले काम गर्ने र आमनागरिकले पनि बुझ्नुपर्छ । प्रहरी सबै ठाउँमा पुग्न सक्दैन । नागरिकले पनि आफैं संवेदनशील हुनुपर्छ ।
सीमा नाका पनि एकदमै कडा बनाउनुपर्छ । अहिले अलिकति कम भएको जस्तो लागेको छ । तर, अस्पतालमा आउने संक्रमितहरू प्रायः चिन्ताजनक अवस्थामा नै आउने गर्छन् । धेरैजसो होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको हेलचेत्र्mयाइँले गर्दा समस्या हुने गरेको छ । उनीहरू स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको निगरानीमा बसेनन् । आइसोलेसनमा बस्नेहरूको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा ख्याल गरेनन् । त्यतिखेर लक्षण नदेखाउन सक्छ । तर, अन्तिम अवस्थामा मात्रै अस्पतालमा आउने गरेका छन् । गत वर्ष सबै स्थानीय तहहरूले बनाएका आइसोलेसनमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू खटेर उपचारसेवा पु¥याएका थिए । यस पटक आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन नहुँदा होेम आइसोलेसनमा बस्न बाध्य भए । त्यसले पनि स्वास्थ्यमा जटिल समस्या आएर ज्यान गुमाएका छन् । तहगत सरकारहरू जिम्मेवार भइदिएनन् । गत वर्ष जस्तै हरेक स्थानीय तहहरूले आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर संक्रमितलाई राखेको भए स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट उनीहरूले सेवा पाउँथे र ज्यान जोखिममा रहँदैनथ्यो । अहिले सर्लाहीसम्मका बिरामीहरू नारायणी अस्पतालमै आउँछन् । एक त जनशक्ति अभाव छ । त्यसमा पनि संक्रमितको चाप निकै समस्या भएको छ ।
प्रस्तुति : निरज पिठाकोटे मगर
बिरामी ढिलो आइपुग्दा समस्या जटिल भयो
डा. निराजनदत्त शर्मा
कन्सल्टेन्ट फिजिसियन, सेती प्रादेशिक अस्पताल
दिनदिनै कोभिडका बिरामी बढिरहेका छन् । बिरामीहरूलाई ग्यालरीमा समेत राखेर उपचार गरिरहेका छौं । ६० बेडको आइसोलेसन छ । १५ बेडको आईसीयू छ र तीन बेडको भेन्टिलेटर छ । हामीसँग जम्मा ७८ जना कोरोना संक्रमितलाई राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था छ । तर यहाँ बिरामीको संख्या निकै धेरै छ । बिरामीहरू थपिने क्रम जारी नै छ ।
संक्रमितमध्ये प्रायःलाई श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखिएको छ । तीमध्ये केहीलाई निमोनियाँको समस्या छ । श्वासप्रश्वास र निमोनियाँको समस्या भएका बिरामीलाई अक्सिजन दिन आवश्यक छ । अस्पतालकै प्लान्टबाट उत्पादन भएको अक्सिजन सिलिन्डरमा भरेर संक्रमितलाई दिइरहेका छौं । अस्पतालमा मात्रै उत्पादन भएको अक्सिजन बिरामीलाई अपुग छ । सामान्य अवस्थामा रहँदा अस्पतालको नियमित उपचारमा अस्पतालको उत्पादनले अक्सिजन पुगेको थियो । अप्रेसन, इमर्जेन्सी, डेलिभरीमा पनि अक्सिजन उत्तिकै चाहिएको छ । कोरोना महामारीका रूपमा आएपछि बिरामी पनि ह्वात्तै बढेका छन् । यस्तो बेला स्वाभाविक रूपमा अक्सिजन अपुग भएको छ । सरकारले तत्काल अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । उत्पादन र आपूर्तिभन्दा माग कैयौं गुणा बढी छ । तत्कालाई सिलिन्डरमा भरेर काम चलाइए पनि ठूलो प्लान्ट जडान गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो । सरकारले प्लान्ट राख्न नै ध्यान दिनुपर्छ । प्रेसरले अक्सिजन दिनुपर्ने संक्रमितलाई सिलिन्डरको अक्सिजनले समेत नभ्याइरहेको अवस्था हो । तत्कालका लागि सिलिन्डरको अक्सिजनले काम चलाइएको भए पनि दीर्घ रूपमा उपचारका लागि ठूला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नै आवश्यक छ । प्रेसरले दिने अक्सिजन सिलिन्डरले पुग्दैन । ठूलो प्रेसर दिन सक्ने मेसिन नै चाहिन्छ ।
खास गरेर बिरामीहरू ढिलो अस्पतालमा आउने गर्नाले अस्पतालमा आउनेजतिलाई कडा खालको संक्रमण देखिएको छ । रुघा, खोकी, टाउको दुखाइ, ज्वरो आउने जस्ता समस्या देखिएपछि घरमै बसिरहने र उपचारमा जानैपरे नजिकको मेडिकलमा गएर सामान्य चेकजाँच गरेर औषधि खाने गरेका छन् । भाइरल ज्वरो, टाइफाइडजस्ता रोगको औषधि खाइरहेको अस्पतालमा आउने अधिकांश बिरामीलाई भेट्टाएका छौं । यही कारणले श्वासप्रश्वास र निमोनियासहितका कोभिड संक्रमित आउँछन् । संक्रमितहरूलाई माइलेस, मोडरेट र सिरियस गरी तीन समूहमा विभाजन गरी उपचार गर्दैछौं । माइलेस संक्रमितलाई होमआइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिँदैछ भने मोडरेटमा अस्पतालको आइसोलेसन र सिरियस संक्रमितलाई आईसीयू र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा बिरामीहरूले धेरै औषधि खाइराख्नु पर्दैछ । रुघा, खोकी, टाउको दुखाइ, ज्वरो आउने, थकान महसुस हुने जस्ता लक्षण देखा पर्नासाथ बिरामीले मेडिकल नगएर अस्पतालमै आउन आवश्यक छ । अहिले सकेसम्म पीसीआर परीक्षण गरेर मात्रै औषधि खान जरुरी छ । नभए कम्तीमा एन्टिजेन परीक्षण गर्नुपर्छ ।
गाउँघरतिरै नजिकैको मेडिकलमा सामान्य परीक्षणबाट औषधि खाँदा तत्काललाई निको भएजस्तो भए पनि पछि त्यसले उल्टो असर गर्ने गरेको छ र बिरामी सिरियस भएर अस्पताल आइरहेका छन् । ढिलो पुग्नुले नै कोरोनाले संक्रमितलाई श्वासप्रश्वास र निमोनियाले ग्रसित बनाइरहेको छ । भारतबाट आइरहेका संक्रमितहरूलाई पनि अस्पताल पुग्न ढिलो भइरहेको छ । रुघाखोकी, ज्वरो र टाउको दुख्ने समस्या देखिएमा तुरुन्तै अस्पताल पुगेर चिकित्सकको सल्लाहमा पीसीआर गरेर मात्रै औषधि खानुपर्छ । सही तरिकाले डाइग्नोसिस नभएर खाएको औषधिले गलत असर गर्छ ।
कोभिडका संक्रमितहरूको उपचारका लागि सरकारले पूर्वाधार, अक्सिजन प्लान्ट, जनशक्तिको क्षमता विस्तार गर्न उपयुक्त हुन्छ । पूर्वाधार, अक्सिजन प्लान्ट, जनशक्तिको क्षमता विस्तारका लागि ढिलो गर्न पनि हुँदैन । सकेसम्म कोभिडका बिरामीहरूलाई एउटै ठाउँमा ठूलो संख्यामा राखेर उपचार गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । जसले गर्दा अक्सिजन, खाना, पानी, औषधिलगायतका सुविधाहरू सहज रूपमा बिरामीहरूलाई पुर्याउन सकियोस् ।